को को हुदैछन त दुई नयाँ मन्त्री ?-NepalKanoon.com
को को हुदैछन त दुई नयाँ मन्त्री ?
असार १७, काठमाण्डौ । खाली हुन लागेका एमालेको भागमा परेका दुई मन्त्री पद खेलकुद मन्त्रालय र कृषी मन्त्रालयको पदपुर्ती भोली शुक्रवार हुने एमाले श्रोतले बताएको छ ।
नयाँ जिम्मेवारी लिने मन्त्रीमा सोमनाथ प्यासी, सोम पाण्डे र दिपक कार्कीको नाम चर्चामा रहेको छ भने बलराम वास्कोटा पनि उमेदवारको रुपमा चर्चामा रहेको बताइएको छ ।
चर्चामा रहेका सोमनाथ प्यासी र दिपक कार्की एमालेका अध्यक्ष के.पी. ओली निकटस्त मानीन्छन भने सोमनाथ पाण्डे माधव कुमार नेपाल निकटस्त हुन । त्यस्तै गरी बलराम वास्कोटा वामदेव गौतम निकटस्त मानिन्छन ।
नेपाल पक्षवाट सिफारिस गरिएका पाण्डे माधव नेपालका सम्धी भएको र नेपालको आफन्त मोहमा कुनै कमी नआएको एक केन्द्रिय सदस्यले बताए । नेपालले आफ्नै भाईलाई समेत माहावाणिज्य दुतमा नियुक्त गरेका थिए भने आफन्त र नातागोतालाई प्राथमिकता दिने नेताको रुपमा उहाँको राम्रो पहिचानै बनेको एक असन्तुस्टले कुराकानीमा बताए ।